Ama-Ellicott Dredges | Umholi Womhlaba Wonke Kumasistimu Okudonsela phansi
I-Ellicott Equipment Line
Ama-2000 + Ellicott® brand dredges alethwe kumakhasimende emazweni angaphezu kwekhulu.
Ngephrojekthi edinga izinhloso eziqondile zokusebenza, u-Ellicott ulungele ukukhiqiza i-dredge ehlangabezana nemininingwane eqondile yekhasimende lethu.
Sinikeza uMnyango Wezinsizakalo Zamakhasimende ophelele kakhulu kule mboni ngezingxenye ezisezingeni eliphakeme kanye nochwepheshe abaqeqeshiwe kakhulu.
Umholi Wemboni Wekhwalithi Eyakhiwe Ngekhwalithi
Njengomunye wabahlinzeki abakhulu kunabo bonke emhlabeni wokusika okumaphakathi okusikiwe, i-Ellicott Dredges ithatha isikhundla sayo semakethe ngokungathi sína kakhulu. Amanani ethu ayisisekelo afakwa ku-DNA yawo wonke ama-Ellicott® brand dredge. Kuwo wonke umlando wethu, abanikazi be-brand dredge ye-Ellicott® bafunde ukuthi ukukhiqiza nokwethembeka kuyindlela yethu yokuphila, hhayi nje isisho.
Uhlelo lweBarnstable County, Massachusetts, lokudonsa lusanda kugubha iminyaka engama-25 lwasungulwa. Isifunda, esingabanikazi...
U-Ellicott usanda kuletha futhi waqala i-Series 370 Dragon® dredge ye-shrimp...
I-Ellicott Dredges Isiza Ukungeza ama-2,300 km we-Bangladesh Waterways
Ngo-2012, i-Ellicott yanikela ngemiphakathi yayo yokuqala kuBangladesh Inland Waterway Transport Authority (BIWTA) ...
Vele ngifuna ukusho ukuthi ngiyabonga futhi, i-300 SL Dragon yakho ingumshini osezingeni eliphakeme kakhulu! Amawashi amaningi ikakhulukazi “amanzi okugibela amadala wehla” ngesikhathi opharetha esetha ukusika okulandelayo, kepha hhayi lokhu. Sikwazile ukucisha ipompo, ngokushintshwa kweswishi, saqala, sabe sesithumela isitshalo sokwelapha esinomswakama osindayo! Sibe nokuphumula kwe-zero ngenxa yokwehla kwelanga.
UJames E. Riley
Riley Dredge Ukubonisana
Sihlabeke umxhwele kakhulu nge-Brutus [i-460S dredge yethu), kungumbono ngempela ukubona uhleli esitolo, futhi, ukusebenza kwekhwalithi ephezulu, ukuziqhenya nokunaka imininingwane kukhombisa ukuzinikela kwalabo abahilelekile… Inkonzo yamakhasimende nokunaka imininingwane efana nale kungalesi sizathu… uMnyango wase-Ohio Wezemvelo uyaziqhenya ngobuhlobo bethu obude no-Ellicott Dredges.
Bob Cumbow, iSekela Lenkosi
Amapaki e-Ohio State
Kusukela ngo-1990, mina nomakhenikha wami sixhumane nesevisi yamakhasimende kanye nokwahlukaniswa kwezingxenye kaningi futhi bonke abasebenzi bakwa-Ellicott® basiphathe ngenhlonipho nangobuqotho. I "Rudee Inlet II" dredge isebenzele iDolobha laseVirginia Beach kahle kakhulu kusukela ngo-1987 futhi isesimweni esihle kakhulu kuze kube namuhla.
Umphathi Wezokusebenza, Isigaba Somgwaqo Esikhulu Semisebenzi Yomphakathi